Mayelana NATHI - iDalian River Lake Fishing Tackle Co., Ltd.
IDalian River Lake Fishing Tackle Co., Ltd. ibhizinisi elihlanganisa i-R & D, idizayini, ukukhiqiza nokuthengisa. Imikhiqizo yethu eyinhloko ithengiswa kuzingxenyekazi ezahlukahlukene zamazwe omhlaba ezihamba phambili ze-e-commerce. Sineminyaka ecishe ibe ngu-10 yesipiliyoni esiphumelelayo ekuhwebeni nge-inthanethi. Amakhasimende ethu avela eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eYurophu, e-Australia, eningizimu-mpumalanga ye-Asia nakwamanye amazwe nezifunda. Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka phakathi: induku yokuvutha kokudoba, izicupho zokudoba, ihuku lokudoba, Umugqa wokudoba, ithuluzi lokudoba, izesekeli zokudoba neminye imikhiqizo yamagiya okudoba. Kuyo yonke imikhiqizo yethu, sincintisana kakhulu ngokwentengo nokusebenza.
Sinegama elihle lokunikeza ubuciko nobuciko obusezingeni eliphakeme ngamanani aphansi. Umsebenzi wethu yisimo sokuwina phakathi kwabathengi nathi.
Njengokudoba kokudoba. Umkhiqizi oqeqeshiwe wezindlela ezingama-500 + zokukhohlisa, sinendawo yokusebenzela yokukhiqiza yamamitha skwele ayi-10,000 + kanye nabasebenzi abanamakhono ayi-180 +. Sinikeza amakhasimende amanani entengo yasendulo nemikhiqizo esezingeni eliphakeme, konke okuhambisana namazinga omhlaba, futhi amasampuli anganikezwa ngokushesha nganoma yisiphi isikhathi.
Indlela yethu yokupakisha ihambelana nendlela yokupakisha efanelekayo ekuhwebeni kwamazwe omhlaba. Sisebenzisa izikhwama ze-bubble ezisezingeni eliphakeme namabhokisi we-universal njengezinto. Ngemininingwane eminingi, sicela usithumelele isibuyekezo.
Ikhwalithi yisisekelo sebhizinisi lethu eliku-inthanethi, elilandelwa ukusebenza kahle nezintengo zokuncintisana. Sizokusiza ngekhwalithi ehamba phambili nangejubane elisheshayo, njalo ngokususelwa ekwethembekeni nasendaweni yamakhasimende. Amakhasimende avela emhlabeni wonke! Sicela uxhumane nathi, ngoba siyakwamukela ngobuqotho. Sicela uxhumane nathi, ngoba silangazelela ngobuqotho ukubambisana nawe!